ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: မြန်မာနိုင်ငံ ပညာရေး အဆင့်အတန်း နိမ့်ကျသွားရခြင်း အကြောင်းရင်းနှင့် တရားခံများ
ဒီပုတ်ထဲက ဒီ ပဲ။
မောင်မောင်ကြီး ဆိုရင် လက်ခံမယ်။
စက်ရုံကရိုက်ထုတ်သလိုအရည်အချင်းမရှိဘဲအောင်ခဲ့တာဆိုတော့ ကိုလွမ်းဆွေရတဲ့ဒေါက်တာဘွဲ့ကလဲ အရည်အချင်းမရှိတဲ့အထဲပါမှာပေါ့နော်..
Myheartwill go on said...
sao khun one said...
who is to be blame? we can neither forget nor forgive.
အစိုးရပြောင်းမှ ပညာရေးကောင်းမှာပါ ။